IVanuatu yagcwala ngamanzi! Kunye neendwendwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » IVanuatu yagcwala ngamanzi! Kunye neendwendwe
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zeVanuatu Breaking
Julayi 31, 2018
I-Independence Park eVanuatu yamkele iindwendwe ezininzi ezivela eNoumea ukuya kuMnyhadala wenkululeko.
Ukongeza kwabo bahlala apho, i-Independence Park eVanuatu yamkela inqwelomoya yenqwelomoya yeendwendwe ezivela eNoumea kunye nezinye iindwendwe ezivela kwiziqithi ezikufutshane ukuya kumnyhadala welizwe we-Independence Anniversary ngeCawa, nge-38 kaJulayi. Ipaki ibekwe ecaleni kweLe Meridien Port Vila Resort .
INoumea sisixeko esilikomkhulu laseNew Caledonia kwaye imi elwandle. Amabhayi aliqela ahamba esixekweni ebonelela ngamabhishi amahle kunye neendawo zokujonga. Ngaphandle kweempawu zayo zendalo, iNoumea ikwaneminikelo yenkcubeko enomtsalane kubakhenkethi abakhetha ukutyelela apho.
NgeCawa, ngaphezulu kwe-4,000 yabantu bebehlanganisene epakini ukuzobhiyozela njengoko amapolisa azibeka ngokwabo ukugcina uxolo kulo msitho.
Inkulumbuso yaseVanuatu uCharlot Salwai Tabimasmas wavula lo msitho ngentetho eyamkelekileyo apho wakhankanya imeko kwisiqithi saseAmbae esineengxaki zokuqhuma kwentaba-mlilo kunye nokuwa komlotha okulandelayo. Ukhuphe umbulelo kurhulumente ngokubonisa inkxaso yakhe ngeli xesha lentlekele yendalo.
Isiqithi esincinci saseVanuatu saseAmbae sakhutshwa ngokupheleleyo kwiintsuku ezi-3 ezidlulileyo okwesihlandlo sesibini njengoko intaba-mlilo yayo yaqhuma kwakhona ukusukela ngoSeptemba ophelileyo xa yayikhutshiwe ngokupheleleyo. Intaba-mlilo iManaro Voui yaqala ukukhupha uthuthu, kwaye amagosa ayalela bonke abahlali ukuba bahambe kwangoko, besabela kwiziqithi ezingabamelwane.
Inkulumbuso ikwathethile ngokubaluleka kokuqinisa iziseko zophuhliso, esithi ayizukudala ingqesho kuphela kwaye inyuse uqoqosho, izakukhuthaza nokuhamba kwabakhenkethi baye kwezi ziqithi. Inkulumbuso ichaze iZiko leMidlalo laseKorman, iLapetasi Wharf, iZiseko zoPhuhliso zeNdlela yasePort Vila, Isikhululo senqwelomoya saseBauerfield, Isikhululo senqwelomoya sasePekoa, isikhululo seenqwelomoya saseWhitegrass kunye nophuhliso lwendlela eTanna naseMalekula kunye nentambo yangaphantsi kolwandle.
Uqukumbele ngelithi, "Simele simanyane maxa onke ukwakha iVanuatu engcono yezizukulwana ezizayo - abantwana bangomso."